Ndị na-eke mmiri na-ekesa mmiri C na-ere mmiri → na-ere mmiri na Poland
Onye na-enye mmiri
Mkpa gị onye na-enye mmiri n'ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ? Water Water dị ka naanị onye nnọchi anya Ihe ịchọ mma na Poland ka enyekwa onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder maka ojiji ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ, ụlọ oriri, ụlọ ọrụ, ọfịs, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ogige na ogige egwuregwu, mma salons na ụlọ.
Cosmetal taa bụ onye na - emepụta Italiantali kachasị ukwuu na onye ndu ụwa niile na mmepụta ihe ọhụrụ maka mmiri ọ drinkingụ drinkingụ.
Ntinye nke igwe nju oyi, ma na karama na mmiri, bu nke 100% emere n’Itali.
Cosmetal na-etu ọnụ n'ime otu n'ime ihe kachasị dị na ụlọ ọrụ ahụ, ma usoro nke ụdị ngwaahịa anapụtara mmiri - okpomọkụ dị n'ime ụlọ, oyi, ọkụ, nke na - egbu maramara - yana ụdị dị iche iche dị.
Nkwekọrịta mba ụwa, yana ụdị ngwaahịa ya, ekwela ka ụlọ ọrụ nka a wee ruo n'ọkwa ma bụrụ onye na-eweta ụfọdụ n'ime azụmaahịa kachasị mkpa, ma na andtali na gburugburu ụwa, maka nke a na-emepụta usoro omenala.
Budata katalogi >>
Ndị na-enye mmiri ga-ebugharị cylinder na-enweghị cylinder
Hi-Klas bụ ụlọ ọrụ na-enye mmiri dị eluy, emere ma zube maka ngwa na etiti niile. Ọ na-eji usoro ọrụ ọgbara ọhụrụ kachasị mma na ihe kachasị mma na-ekwe nkwa arụmọrụ kachasị elu na ntụkwasị obi, na-enye gị ohere iru 45 l / h nke mmiri oyi na mmiri na-acha ọkụ na 13 l / h nke mmiri ọkụ.
Ọ na-arụ ọrụ mmiri anọ: Ohere dị n'ime ụlọ, oyi, ịmịchalụ na-ekpo ọkụ, nke enwere ike ịwụnye ya na arịa dị iche iche dị elu na-ekele spout na-agbanwe agbanwe. Formdị oge a; Ikike eji enyo oji mee ihe eji eme ya na igwe anaghị agba nchara na njikwa njikwa na-emepụta ngwaahịa nwere oke uru.
Ihe mgbapụta mmiri na-enweghị mmiri Pro-Styl cylinder. Mmiri oyi, mmiri na-ekpo ọkụ
PRO-STREAM bu onye oru ya na ọgbara ọhụụ na kọmpụta, ya na kọlụm na-echekwa ikuku, njikwa aka na-achịkwa, na-eme ka a mara banyere ọnọdụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ, gụnyere ọrụ: njikere, kpo oku, apụ. Ọ na-arụ ọrụ n'ụdị dịgasị iche iche na a na-esi mmiri mmiri, friji na sistem.
Usoro ahụ nwekwara sistemụ na-arụ ọrụ nke na-achịkwa ọnọdụ ọrụ nke ngwaọrụ ahụ, na -ebelata ike ọrụ na-akpaghị aka. Ọ na - enye mmiri ọkụ na 98 Celsius C site na oge agbanyere ya, nwee ike jupụta iko dị 215 kwa elekere nwere ike nke 250 ml, yana nhọrọ nke mmiri oyi na mmiri na - adọrọ adọrọ ruo 15 l / h. Enwere ike iji ya mee tii, kọfị na ihe ọ otherụ hotụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ ngwa ngwa ma baa uru.
Ndị na-emegharị mmiri Aquality
Aquality - ihe mkpuchi mmiri na-enweghị cylinder: ịrụ ọrụ nke ọma, nke siri ike, nke nwere anya ọgbara ọhụrụ, ejiri akụrụngwa kachasị mma na - arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na njigide ya. Ntinye n'ọrụ nke teknụzụ na teknụzụ etinyere na-arụ ọrụ dị mfe ma dị nchebe, na-emetụta ụgwọ ọrụ arụmọrụ site na ibelata ike ọrụ.
Igwe nju oyi nke Aquality na-akwụ ọtọ na-enye 22 l / h nke mmiri agbajighị agba agba ma gbachajuru anya, ezuru mmadụ iri anọ.
Aquality na-eji teknụzụ ICE Bank na igwe mmiri, jikọtara ya na ntinye mmiri.
Enweghị ọdụ mmiri wuru, nke na-enye nchebe kachasị elu ebe nchekwa adịghị ka echekwara mmiri na ngwụsị izu na ezumike.
A na-echekwa igwe eji eme mmiri. Stkpụrụ mara mma dabara na gburugburu ọ bụla.
Aquality nwere nnukwu nkesa na-enye gị ohere mejupụta ite na karama.
Zuru okè dị ka mmiri mmiri ụlọ ma ọ bụ dị ka mmiri na-enye mmiri ọfịs
Ejidere onye na-ejide ya iko (iko 7)
Enweghị ebe nchekwa / Direct jụrụ oyi
Mmiri mgbe a lyacha n'ọkụ mgbe niile
Actorylọ mmepụta mmiri dị
Hygienic, nhicha nke dị nfe nhicha
Versionsdị dịnụ: mmiri mmiri ime ụlọ, oyi, mmiri ọkụ, na-egbu maramara.
J-Class cylinder na-enye mmiri eji ere mmiri
Ndị na-enye mmiri J-Klas ejikọtara ya na teknụzụ kachasị mma na nke kachasị mma, nke na-eme ha ngwaọrụ a pụrụ ịdabere na ya n'aka ndị ọrụ, n'ihi ọdịdị ya, a na-eji ya n'ọfịs, ụlọ mmanya, obere ụlọ nri na ụlọ.
Ha dị na ụdị abụọ: TOP na tebulu na IN n'okpuru counter, na-ekesa ụdị mmiri anọ: okpomọkụ ụlọ, mmiri oyi, mmiri ọkụ na 98 Celsius C na mmiri carbonated, nwere ikike abụọ 30 l / h na 45 l / h.
Cylinder na-enweghị mmiri Niagara Top mmiri
Agaragbọ mmiri Niagara - ndị na-enye mmiri sitere na ezinaụlọ a nwere ngwaọrụ ọrụ ọkachamara siri ike ma nwee ntụkwasị obi na-eji dochie mmiri ejiri, jụọ ọrụ, kpochapụ mkpa maka nyocha na nchekwa, chekwaa oge na ịkwado ngwa agha, ma na-enye ụkpụrụ kachasị arụmọrụ na arụmọrụ kachasị mma.
Ya mere, emebere ha maka ngwa ndị buru ibu, na-ekwe nkwa arụmọrụ na-enweghị nsogbu mgbe ị na-ekesa nnukwu mmiri carbonated na mmiri na-enweghị carbon, na-enye gị ohere jupụta ụdị ụgbọ mmiri niile ngwa ngwa ma belata ụgwọ ọrụ. Enwere ụdị atọ: elu countertop, IN n'okpuru counter na freestanding.
DRINK TOWER cylinder na-enye mmiri na-enweghị mmiri
Zuru oke maka inyefe mmiri mmiri buru ibu, ma ya fọdụkwa. Ọ dabara n'ụzọ zuru oke na mpaghara nri: n'ụlọ mmanya, ụlọ nri, n'ụlọ oriri na ọteụ hotelsụ. Enwere ike jikọta onye nkesa ahụ na sistemụ ihe ọ bụla iji mezuo ihe ọ bụla achọrọ. Udo eji na nhọrọ nke ihe di elu na-ekwe nkwa idi ocha ma n’otu oge belata mkpa odi mmezi.
Ihe mkpuchi mmiri H2O na-enweghị cylinder m
H2O anyị bụ onye na-enye mmiri na kọmpat, akụkụ ọgbara ọhụrụ, ịrụ ọrụ dị mfe ma na-eche echiche, ịbụ ezigbo ezigbo mmiri mmiri dị mma n'ime ụlọ, oyi, na-egbu maramara ma na-ekpo ọkụ.
Ọ na-abịa na nsụgharị abụọ: TOP countertop na IN n'okpuru countertop na spout.
Onye na-enye mmiri pọpụfịghị mmiri G ZERO
Faịlit klọpị nke ejiri akwa ojii ma ọ bụ nke achiri agbaze.
Ihe mgbapu mmiri Acqua Alma Point na-enweghị mmiri - Ahụmahụ dijitalụ ọhụrụ na-etinye aka iji chebe ụwa anyị
Acqua Alma Point bụ onye ntụgharị mara mma nke nwere ike ịgbasa ụdị mmiri ọ bụla, mee ya iji mepụta ihe ọ customụ customụ omenala, mana ọtụtụ n'ime ha na onye ọrụ na-emekọrịta ihe site na Acqua Alma Refill APP na ezigbo karama nwere akara NFC. Site na ngwa ahụ, onye ọrụ ahụ nwere ike ijikwa profaịlụ, ihe masịrị, nri, na-enyocha ọkwa hydration mgbe niile ma chọta ebe Acqua Alma dị nso. Agbanyeghị na NFC, karama ahụ jikọtara ya na profaịlụ onye ọrụ wee mara nke igwe ahụ, na-echeta ọkacha mmasị ma ọ bụ nkwalite na-arụ ọrụ n'ime profaịlụ.
Ebe a na-acho acho Almandị na-agba mmiri na-enweghị mmiriihe mkpuchi mmiri na-enweghị cylinderkarama mmiri nye onye nkesaebe obibi mmirimmiri nye ọfịswunye mmiri mmiri n'ụlọndị na-enye mmiri n’ụlọ ọrụmmiri maka ụlọ ọrụnkesa mmiri ịnwetaonye na-enye mmirionye na-enye mmirionye mgbaputa mmirinkesa igwe na-ere igwemmiri na-ekesa Warsawonye na - ekpo mmiri ọkụonye na-enye mmirionye na-enye mmiriOnye na - enye mmiri mmiri 5lOnye na-enye mmiri na-enweghị mmiriihe mkpuchi mmiri nke cylinderọnụahịa ihe mgbapụta mmirionyinye onyinye mmirionye na-enye mmirionye na-enye mmiri maka ọfịsebe obibi mmiriọnụahịa ụlọ mmirinyocha ụlọ mmiri na-enyocha mmirionye na-enye mmiri maka ụlọ ọrụmmiri ọensụ dispụ mmirieden mmiri nkesaonye na-enye mmiri mmiri carbonatedOnye na-enye mmiri ikuku carbonatededen na-emegharị mmirimmiri na-ekesa otu esi arụ ọrụonye na - enye mmiri mmirionye na-eme mmirimmiri ọensụ dispụ mmirionye na-enye mmiri na frizaonye na - enye mmiri na friza ka esi arụ ọrụmmiri na-ekesa Warsawmgbazinye mmiri mgbazinyemmiri mgbazinye ụgwọ mgbazinye mmiriihe nkesa co2mgbata mmirionye na-enye mmiri na frizaonye na-enye mmiri oyindị na-enye mmiri maka ụlọ ọrụ na ọfịsndị na-enye mmirindị na-enye mmiri maka ụlọ ọrụndị na-enye mmiri maka ọfịsndị na-enye mmiri n’ụlọedenne mmiri esi agba mmirindị na-enye mmirimmiri ọ drinkingụ dispụ ndị na-a drinkingụ mmirindị na-enye mmiri mmirindị na-enye mmiriOtu onye na-enye mmirimmiri iyiOnye na-enye mmiri frijiIsi mmirimmiri maka ọfịsmmiri maka ọfịsmmiri maka ndepụta ọnụahịa ụlọ ọrụebe obibi mmirindị na-enye mmirionye na - ekesa mmirimmiri nyekwara ụlọ ọrụmmiri esi na onye na-ewepụta ihemmiri si n’aka ndị na-ekesa maka ụlọ ọrụmmiri esi na onye na-ewepụta ihe n’ụlọmmiri site na nyocha ihe nyochammiri na onye na-enye ihemmiri mmiri na nnyefe ụlọ
Hụ ngwaahịa ndị ọzọ:
Aka aka na ebe ikuku
Onye na-a drinkụ mmanya